Ogaden News Agency (ONA) – Wafti Balaadhan oo uu Horkacayo Gudoomiyaha Jaaliyadda Ogadeenya ee Norway oo Booqasho hawleed Ku maraya Gobolada dalka
Wafti Balaadhan oo uu Horkacayo Gudoomiyaha Jaaliyadda Ogadeenya ee Norway oo Booqasho hawleed Ku maraya Gobolada dalka
Posted by ONA Admin	/ March 4, 2012
Oslo: 04-Feb-2012- Waxaa shalay caasimadaOsloee dalkaNorwayka ambabaxay, wafti balaadhan oo ka kooban 8 xubnood uuna horkacayey gudoomiyaha Jaaliyadda S. Ogadeenya Mudane Abdirahman Sheekh Yusuf. Waftiga oo xalay ku hoyday magaaladaBergenoo kamid ah magaalooyinka ay degan yihiin Jaaliyadaha Ogadeniya ee ku dhaqan dalka , ayaa shir si heer sare ah loo soo agaasimay ku qabtay hall-ka shirarka ee ku yaala badhtamaha magaalada. Kulanka ayaa waxa soo xaadiray dad badan oo isugu jira wax-garadka, culimaa’udiinka, hooyooyinka iyo dhalinyarada ku dhaqan magaaladaBergen.
Gudoomiyaha Jaaliyadda Mudane Abdirahman Sheekh Yusuf, ayaa war bixin waafi ah ka siiyey dadkii goobta isugu yimid hawlaha kala duwan ee jaaliyadu ku talaabsatay mudooyinka dambe iyo kaalinta muhiimka ah ee Jaaliyadu ka qaadato mideynta iyo isku-xidhka bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaNorway.
Intaas kadib, waxa mikrafoonka lagu soo dhaweeyey Dr. Abdirashid Gooni, oo madashada shirka kasoo jeediyey khudbad si aad ah loogu diirsad oo uu kaga hadlayey marxalada uu ku sugan yahay geeska Afrika iyo qaabka ugu haboon ee ay tahay inaan u la socono siyaasadaha isbad-badalka badan ee ka socda man’diqada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhulka Ogadeeniya. Dr. Gooni ayaa hoosta ka xariiqay sida ay lagama maar-maanka u tahay xal waara oo loo helo qadiyadda Soomaalida Ogadeenia, oo uu ku sheegay inay horseedi doonto deganaansho siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ka dhaca wadama kuyaala geeska, islamarkaasna soo celin karta magacii iyo sumcadii Soomaalidu lahaan jirtay aduunka.
Sidoo kale, Mudane Mohamed Dheeg oo kamid ahaa xubana waftiga ayaa kasoo jeedshay goobta qoraallo si cilmiyeysan loo soo diyaarshay oo ka hadlayey taariikhda dheer ee halganka, dhulka iyo Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqanka dalka Ogadenia. Qoraalladan oo xambaarsanaa sawiro iyo cajalo laga soo duubay Ogadeenia, ayaa muujinayey xasuuqa iyo isir tirtirida gumeysigu ku hayo shacabka ku dhaqan Ogadeeniya. Mudanaha ayaa hadalkiisa ku soo gunaanaday waajibka diimeed iyo midka walaaltinimo ee looga baahan yahay qof walba oo damiir leh inuu kaga qeyb qaato halganka dhinac kasto leh ee loogu jiro sidii gumeysiga looga xoreyn lahaa Ogadeenya, shacabkeenuna ku heli lahaa xoriyad iyo madax-banaani buuxda.
Booqasho hawleedka maalmahan uu ku marayo maamulka Jaaliyaddu gobolo ka tirsan dalka Norway, sida magaalada Bergen oo waftigu hadda ku sugan yahay, ayaa la kulantay soo dhaweyn iyo boogadin ay muujinayeen dhamaan dadkii waftigu la kulmay, sidoo kale socdaal hawleedkan ayaa astaan iyo iftiin rajo oo waxqabad ku dheehan yahay u ah qaabka wadaniyadda iyo xilkasnimada ah ee maamulka iyo xubnaha Jaaliyadu ugu guntadeen siday uga midho dhalin lahaayeen himilooyinka ay higsanayaan sanooyin badan Shacabka Ogadeenya, ummaddan oo ay daashadeen dhibaatada, hagar-daamada iyo gumeysiga ay ku hayaan qoyska tigreega ee uu horjoogaha ka yahay kaligii taliye Males Zenawi.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa haddii alle idmo warbixino maqal iyo muuqaal ah oo ku saabsan socdaalka waftiga.